कारण थाहा भएर पनि भन्न नमिल्ने कस्तो ‘विशेष कारण’ हो? – MySansar
कारण थाहा भएर पनि भन्न नमिल्ने कस्तो ‘विशेष कारण’ हो?
Posted on November 2, 2016 November 2, 2016 by Salokya
भारतीय राष्ट्रपतिले १८ वर्षपछि नेपालको भ्रमण गर्दैछन् आजदेखि। औपचारिक भ्रमण भएपछि जुन देशमा पनि सवारी चलाउँदा केही समय भए पनि सर्वसाधारणलाई अप्ठेरोको सामना गर्नुपर्छ नै। तर नेपालमा चाहिँ आज सवारी हुने ठाउँ, जिल्ला मात्र हैन, सिङ्गो देश र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा समेत विदा दिइयो। त्यसो त चिनियाँ राष्ट्रपति आएको भए पनि हुने यस्तै थियो, सात वर्षअघि श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्ष आउँदा पनि सडक यस्तै थियो। तर यस पटक भने अघिल्लो वर्ष नाकाबन्दीको पीडा सहेका कारण नेपालीहरुको आलो घाउमा नून छर्किए सरह भएको छ भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण र त्यसले निम्त्याएको सास्ती।
सार्क शिखर सम्मेलनमा जस्तो कडा सुरक्षा र बाटो बन्द यसपालि नभए पनि हल्ला चैँ व्यापक भएको छ। सवारी रुटमा दुई घण्टा अघिदेखि आवागमन रोकिने भएपछि सास्ती त हुन्छ नै। तर पैदलै हिँड्न नदिएको चाहिँ सवारी हुनुभन्दा केही मिनेट अघि र पछि मात्रै हो।
धन्न बुधबार भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आउने दिन सार्वजनिक विदा थियो। बिहीबार त विदा छैन। बिहीबार चाहिँ मान्छेले बुधबार गरिएको हल्लाभन्दा बढी सास्ती बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ।
ट्राफिक प्रहरी आफैले पनि मोबाइलमा एसएमएस र फेसबुकमा सूचना राखेर अवरुद्ध हुने रुटको बारेमा जानकारी दिएको छ। यो सूचनामा ‘विशेष कारणवश’ लेखिनु चाहिँ हाँसो उठ्ने लाग्यो। कारण त सबैलाई थाहा छ नि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण भनेर। कारण लुकाउनु पर्ने चाहिँ किन होला?